भजनसंग्रह 105 ERV-NE - परमप्रभुलाई - Bible Gateway
भजनसंग्रह 104भजनसंग्रह 106
भजनसंग्रह 105 Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)
105 परमप्रभुलाई धन्यवाद देऊ, उहाँको नाउँको उपासना गर।
सबै जाति-जाति मानिसहरूलाई ती अचम्भ लाग्दा कुराहरूको बारेमा भन जुन उहाँले गर्नुहुन्छ।
2 परमप्रभु प्रति भजन गाओ, उहाँको प्रशंसा गर।
उहाँले गर्नु भएको अलौकिक कुराहरूको बारेमा बताऊ जो उहाँले गर्नुहुन्छ।
3 परमप्रभुको पवित्र नाउँमा घमण्ड गर।
तिमीहरू परमप्रभुलाई खोज्दै-खोज्दै आई पुग्यौं त्यसैले अब खुशी हौ।
4 बल पाउनुलाई परमप्रभु कहाँ जाऊ।
सहायताको लागि सधैँ उहाँकोमा जाऊ।
5 याद गर ती अचम्मका कुराहरू जुन उहाँले गर्नुहुन्छ।
याद गर उहाँका आश्चर्यकामहरू साथै उहाँका बुद्धिमानी निर्णयहरू।
6 तिमीहरू उहाँका दास अब्राहामका सन्तानहरू हौ।
तिमीहरू याकूबका सन्तानहरू हौं तिमीहरू परमेश्वरद्वारा छानिएको मानिसहरू हौ।
7 परमप्रभु नै हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ।
परमप्रभुले सारा संसारमा राज्य गर्नुहुन्छ।
8 परमेश्वरको करार पत्र सदा-सर्वदा याद गर।
याद गर उहाँले एक हजार पुस्ताहरूलाई दिनुभएका उहाँका आदेशहरू!
9 परमेश्वरले अब्राहामसित करार गर्नु भएको थियो।
परमेश्वरले इसहाक प्रति प्रतिज्ञा राख्नु भएको थियो।
10 त्यसपछि याकूबको लागि यो नियम झै बनाउनु भयो।
परमेश्वरले इस्राएल सँग करार गर्नु भएको थियो,
यो सदा-सर्वदा रहिरहने छ।
11 परमेश्वरले भन्नुभयो, “म तिमीहरूलाई कनानको देश दिनेछु।
त्यो देश तिमीहरूकै सम्पत्ति हुनेछ।”
12 परमेश्वरले त्यो वचन त्यतिबेला राख्नु भएको थियो।
जब अब्राहामका परिवारहरू स-साना थिए।
तिनीहरू त्यहाँ परदेशीहरू जस्तै बसे।
13 तिनीहरू एक जातिदेखि अर्को जाति,
एक राज्य देखि अर्को राज्य हुँदै भ्रमण गर्दै हिंडे।
14 तर परमेश्वरले तिनीहरूप्रति अत्याचार गर्न दिनु भएन।
परमेश्वरले राजाहरूलाई पनि तिनीहरूलाई दुःख नदिनु भनेर चेताउनी दिनुभएको थियो।
15 परमेश्वरले भन्नुभयो, “मैले रोजेका मानिसहरूलाई दुःख नदेऊ।
मेरो अगमवक्ताहरू प्रति अधर्मी व्यवहार गर्दै नगर।”
16 परमेश्वरले त्यस देशमा अनिकाल पारिदिनु भयो।
मानिसहरूले खानलाई प्रशस्त भोजन पाएनन्।
17 तर परमेश्वरले यूसुफ नाउँका एकजनालाई तिनीहरूको अगाडि त्यस ठाउँमा पठाउनु भयो।
यूसुफ एक कमारा सरह बेचियो।
18 तिनीहरूले यूसुफका खुट्टा वरिपरि डोरीले कसे।
तिनीहरूले उनको घाँटी वरिपरि फलामको घेरा हाली दिए।
19 उनले भनेका अगमवाणी कुराहरू साँच्चै नहुन्जेल सम्म तिनी दास सरह नै भए।
परमप्रभुको सन्देशले प्रमाण गर्यो कि यूसुफ ठीक मानिस हो।
20 यसैले मिश्रका राजाले उनलाई मुक्त गरिदिएँ।
राष्ट्रका शासकले उनलाई जेल मुक्त गरिदिएँ।
21 उहाँले यूसुफलाई आफ्नो घरको जिम्मामा राखिदिए,
यूसुफले आफ्नो स्वामीको सबै सम्पत्तिमाथि हेरचाह गरे।
22 यूसुफले अन्य अगुवाहरूलाई निर्देश दिए।
यूसुफले बुढापाकाहरूलाई शिक्षा दिए।
23 तब इस्राएल मिश्र तर्फ आए,
याकूब हामको देशमा बसे।
24 याकूबको परिवार अत्यन्त बढेर गयो।
तिनीहरू आफ्ना शत्रुहरू भन्दा धेरै शक्तिशाली भए।
25 यसकारण मिश्रीहरूले याकूबको परिवारलाई हेला गर्न थाले।
तिनीहरूले उनीहरूका दासहरू विरूद्ध योजना तयार गर्न थाले।
26 यसैले परमेश्वरले आफ्ना दास मोशालाई पठाउनु भयो,
अनि उहाँले रोजेको पूजाहारी हारूनलाई पठाउनुभयो।
27 परमेश्वरले मोशा र हारूनको माध्यमद्वारा
हाम्रो देशमा धेरै आश्चर्यकामहरू देखाउनु भयो।
28 परमेश्वरले निक्खुर कालो अन्धकार पठाउनुभयो
तर मिश्रवासीहरूले उहाँलाई सुनेनन्।
29 यसैले परमेश्वरले पानीलाई रगतमा परिवर्तन गर्नुभयो,
अनि त्यहाँका सारा माछाहरू मरे।
30 तिनीहरूका देश भ्यागुतै भ्यागुताले भरियो।
राजाका सुत्ने कोठा पनि भ्यागुताहरू भरिए।
31 परमेश्वरले आज्ञा दिनुभयो, अनि झिंगाहरू र जुम्राहरू आउन थाले।
तिनीहरू चारैतिर फैलिएर गए।
32 परमेश्वरले बर्षालाई असिनामा परिवर्तन गर्नुभयो।
बिजुलीको प्रहार तिनीहरूको देशभरि फ्याँकियो।
33 परमेश्वरले तिनीहरूको अङ्गुरका र नेभराको रूखहरू ध्वंश पारी दिनुभयो।
परमेश्वरले सारा रूखहरू ध्वंश पारी दिनुभयो।
34 परमेश्वरले आज्ञा दिनुभयो, अनि सलहहरू र फटेङ्ग्राहरू आउन थाले।
तिनीहरू अनगन्ति थिए।
35 सलहहरू र फटेङ्ग्राहरूले देशका सारा उद्भिद्हरू खाएर नष्ट पारिदिए।
तिनीहरूले खेतका सारा अन्नबालीहरू खाई नष्ट पारिदिए।
36 त्यसपछि तिनीहरूको देशमा परमेश्वरले पहिलो जन्मेका प्रत्येक पुत्रलाई मारिदिनु भयो।
परमेश्वरले प्रत्येक पुरूषको शक्ति प्रमाणलाई नष्ट पार्नु भयो।
37 त्यसपछि उहाँले आफ्ना मानिसहरू मिश्रबाट निकाल्नु भयो।
तिनीहरूले आफूसँग सुन र चाँदीहरू लिएर आए।
परमेश्वरका मानिसहरू कोही पनि ठोकिएनन् र लडेनन्।
38 परमेश्वरका मानिसहरू गएका देखेर मिश्रवासीहरू खुशी भए
किनभने तिनीहरूबाट उनीहरू भयभीत थिए।
39 परमेश्वरले कम्बल जस्तो बादल फिंजाई दिनुभयो।
परमेश्वरले आफ्नो आगो राती उज्यालो पार्नलाई तिनीहरूलाई दिनुभयो।
40 मानिसहरूले भोजन मागे अनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई वट्टाई चरा ल्याइदिनु भयो।
परमेश्वरले स्वर्गबाट तिनीहरूलाई प्रशस्त खानेकुरा र रोटीहरू दिनुभयो।
41 परमेश्वरले चट्टानलाई खण्डित पार्नु भयो।
अनि त्यहाँबाट भल-भल पानी निस्क्यो।
मरुभूमिमा नदी बग्न थाल्यो।
42 परमेश्वरले उहाँको वचन सम्झनु भयो।
परमेश्वरले आफ्ना दास अब्राहामसँग गर्नु भएको वचन सम्झनुभयो।
43 परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरू मिश्रबाट निकालेर ल्याउनु भयो।
मानिसहरू खुशी र आनन्दले गाउँदै, गाउँदै निस्किए!
44 तब परमेश्वरले तिनीहरूलाई देश दिनुभयो, जहाँ अन्य मानिसहरू बस्दै गरेका थिए।
परमेश्वरका मानिसहरूले अन्य मानिसहरूले गर्नु परेका परिश्रमका चीजहरू पाए।
45 परमेश्वरले त्यसो गर्नुभयो, किनकि उहाँका मानिसहरूले उहाँका नियमहरू पालन गर्न सकुन।
यसकारण तिनीहरूले होशियारीसाथ उहाँका व्यवस्थाहरू पालन गर्न सकुन।